-उन्नति चौधरी : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
बाबुआमा दुवै बेपत्ता भएपछि उनीहरू कैलालीको साविक गोदावरी गाविस-८ मा बड्डीबज्यै अर्थात् आमाकी हजुरआमासँग बस्दै आएका थिए । ती बालबालिका राखेबापत नातिनी बुहारीको गाली खानुपरेपछि बड्डीबज्यैले उनीहरूलाई सुरक्षित आवास गृहमा ल्याएर राखिदिएकी हुन् । त्यसपछि उनीहरू यो अस्थायी केन्द्रलाई नै आफ्नो सधैंको घर ठान्दछन् । दुवै दाजुबहिनी अहिले अत्तरियाकै एक विद्यालयमा दुई कक्षामा पढ्छन् ।
प्रहरीको सहयोगमा पीडित बालिकालाई महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपाल कैलालीले सञ्चालन गरेको सुरक्षित आवास गृहमा राखियो । त्यहाँ पुगेको १५ दिनमै उनले बच्चा जन्माइन् । आमा र बच्चा दुवै अहिले सोही गृहमा बस्दै आएका छन् । नातिनी बलात्कार गर्ने उनका बाजे चाहिं कैलाली कारागारमा कैद सजाय भोगिरहेका छन् ।
मनिषा श्रेष्ठ (१८) : एउटा प्रतिनिधि कथा
जन्मेको दुई महीनामै आमाले मलाई छाडेर दोस्रो बिहे गर्नुभएको रे ! त्यतिबेला बुबा विदेशमा हुनुहुन्थ्यो रे ! मलाई हजुरआमाले हुर्काउनुभएछ । म तीन वर्षकी हुँदा बुबाले विदेशबाट आएर मलाई पोखराको न्यू लाइफ बालगृहमा राखिदिनुभयो । ६ महीना बसेर फेरि विदेशै जानुभयो । त्यसपछि बुबासँग फोनमा सम्पर्क भइरहन्थ्यो । एक–दुई पटक उहाँले नेपाल आएर मलाई भेट्नु पनि भयो ।
दुई वर्षपछिको एक दिन अमृताले आफ्नोे भाइ भन्दै मलाई एउटा केटाको जिम्मा लगाउँदै भनिन्, “तिमीलाई म कहिलेसम्म पाल्न सक्छु र ! अब ऊसँगै जाऊ । उसले तिमीलाई राम्रो काम खोजिदिन्छ ।” त्यतिबेला म १३ वर्षकी थिएँ । नयाँ काम पाउने आशाले खुशी भएँ ।
केही महीनापछि उसले हप्तैपिच्छे नयाँ-नयाँ केटीहरू कोठामा ल्याउन थाल्यो । तिनीहरूसँग मेरै अगाडि शारीरिक सम्बन्धहरू राख्थ्यो । ती केटीहरू कहाँबाट आउँथे र फर्किएर कहाँ जान्थे मलाई केही थाहा हँुदैनथ्यो । उसले मलाई धेरै पिट्थ्यो । म सधैं सहेर बस्थें ।
एकदिन मैले सुवासलाई आफू गर्भवती भएको बताएँ । उसले तीन महीनापछि गर्भपतन गराइदियो । त्यसको केही दिनमै ऊ चोरी मुद्दामा पक्राउ प¥यो र थुनामा गयो । अदालतले उसलाई थुनामुक्त गर्न रु.२ लाख धरौटी मागेको रहेछ । मसँग ज्यालामजदूरीबाट कमाएको रु.३० हजार थियो । अरू रु.१ लाख ७० हजार ६ महीनामा तिर्ने कागज गरेर खोलाको ठेकेदार ज्ञानबहादुर गुरुङसँग ऋण लिएर धरौटी बुझई उसलाई जेलबाट छुटाएँ ।
मैले फोन गरेको नम्बर कञ्चनपुर, गुलरियाको महुवाफाँटा निवासी आशिष चौधरीको रहेछ । ऊ सीमकार्ड लिने बहानामा मलाई भेट्न पोखरा आयो । मसँग प्रेम प्रस्ताव राख्यो । मैले अस्वीकार गरें तर उसले ढिपी नछाडेपछि बुटवल गएर मैले ऊसँगै विवाह गरें । त्यसपछि पोखरामा सँगै बस्न थालें । शुरूका ५/६ महीना राम्रै रहेको सम्बन्ध त्यसपछि धागो चँुडिए झ्ंै भयो ।
admin January 8, 2018	nepali-posts No Comments »